Qaxootiga Dhadhaab oo ka hadlay booqashada madaxweynaha - BBC Somali
Qaxootiga Dhadhaab oo ka hadlay booqashada madaxweynaha
8 Juunyo 2016
Madaxweynaha Somaliya oo maalintii labaad ku sugan magaalada nairobi ayaa la filayaa inuu markale la kulmo dhigiisa Kenya oo ay kawada hadlaan arrinta dib u celinta qaxootiga Somalida ee ku sugan xeryaha Dhadhaab.
Madaxweyne Xasan Sheekh maxamud iyo uhuru Kenyatta ayaa shaly kulmay laakiin ma jiro heshiis ay isla gaareen labada dhinac.
Kenya waxa ay ku adkeysaneysaan go'aankeeda ah in qaxootiga ay celineyso kuwaas oo ay u aragto inay halis ku yihiin amniga. Laakiin Soomaaliya waxa ay dooneysaa in la raaco heshiiskii seddax geesoodka ahaa xilliga celintana Kenya ay kordhiso.
Xuseen Yusuf Faarax waa gudoomiyaha xerada qaxootiga ee Xagardheer, waxaan weydiiyay sida ay qaxooti ahaan u arkaan arrimaha iyo wadahadallada.........